Ohere inweta ọrụ na-esote Ịme CCNA certification | Ọ BỤ
Ohere inweta ọrụ n'azụ Ịme CCNA certification
Ihe nchoputa Cisco CCNA bu uzo di iche iche na-aga n'iru oru di irè nke nwere onodu n'etiti ndi kachasi nma nke ahia netwọk. Cisco Systems bụ onye mmeri n'etiti ndị na-emepụta ihe, ndị si n'aka, na ndị ahịa nke netwọk Routers na Switches. Cisco na-agba ọsọ 'Human Network' - nke dị oke egwu ma buru ibu ọnụ ọgụgụ nke Multimedia nke na-ejikọta ndị mmadụ na ụwa na ntanetịime Audio na Video. Nchoputa CCNA bụ ihe na-eme ka ọ dịrị ndụ na ika a. CCNA bu uzo ozo nke di ogologo ma choo oke oku nke ichoro maka ọdịnihu gi.
Cisco na-enye CCNA ọzụzụ na nkwenye nke ga-enyere gị aka inwe ọganihu na ọrụ ị họọrọ. Cisco ọrụ nkwenye mmemme awade ndokwa ke ise etoju -
Ndị nchọnya igwe, ndị isi na etiti ígwé ojii na-ewuli elu: Nlekọta Ndị mmekọ na-enye dị iche iche CCNA ma ọ bụ Cisco Certified Network Associate. CCNA Cloud bụ ihe enyemaka maka ndị injinia igwe ojii, ndị isi ojii na ndị na-emepụta ihe. Ndokwa a bụ ụzọ dị ịtụnanya isi mee ka ị nweta ihe ndị dị mkpa ma chọpụta otú ị ga-esi hụ ọganihu mmepe nke njikọ. The proposed courseware incorporate understanding Cisco Cloud Fundamentals na-eweta Cisco ojii nchịkwa nke bụ inweta site na Cisco kọmputa ọbá akwụkwọ.
Ọrụ Nchebe: CCNA Cyber ​​Ops bụ njikere nke ga-emeghere gị ọnụ ụzọ dị iche iche. Idebe nchekwa kọmputa bụ ọrụ na-agbalịsi ike maka ọzụzụ CCNA Cyber ​​Ops ga-eme ka ị guzosie ike. Mgbe nzere ntozu a, ị nwere ike ịmalite ọrụ gị ma lekwasị anya na arụmọrụ nche. Site na CCNA Data Center, CISCO na-enye atụmatụ sara mbara nke ga-enyere gị aka ịchekwa oge na ego na echiche, dịka ọmụmaatụ, ihe nkesa na-azụlite usoro, eji na nchekwa. Maka ndị tinyere na mpaghara ebe ebe IT na ụlọ ọrụ dị ugbu a, CCNA Industrial bụ mkpebi kacha mma. Ọ dị oke mkpa maka ịchịkọta, ịchịkwa njikwa, na mmanụ na gas.
Nche: Nlekọta CCNA ọzọ nke CISCO na-enye bụ CCNA Security. Ihe nwere ike iji nchekwa nke CCNA ga-enwe ike ịmepụta ihe nchedo, hụ nsogbu na ime ka ndokwa dị ize ndụ ghara ịdị. Ọ ga-enwe ọganihu na mmepe eji mee ihe dịka otu ihe nchebe. Ndị ọkachamara na CCNA Routing, Cisco CCENT na Switching, ma ọ bụ ihe ọ bụla CCIE na-akwado iji kwado atụmatụ nchịkwa CCNA.
Ikuku: CCNA Wireless affirmation adreesị okwu nke ndị ọkachamara wireless ọkachamara na-ekweta na ọganihu nke azụmahịa na-na ụwa zuru okè depụtara, elele na ọzọ na gburugburu bolstered. Ụdị ọzụzụ a ga-eme ka ị nweta ihe ọmụma gị na ihe ndị dị na LAN, ịlele na nyocha. Ị ga-enwe ike ịmepụta netwọpụ dịpụrụ adịpụ iji hazie ma ọ bụ netwọk nnweta dịkwuo mkpa. Ntuziaka a nwere ọtụtụ ihe dị mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, CCNA na-enye ezigbo aka na ọrụ gị ma mee ka ị na-aga n'ihu. Asambodo na CCNA enyere gi aka igbanwe ihe bara uru maka nkpa gi.
Akaụntụ CCNA - Nduzi zuru ezu
Kedu ihe ụlọ ọrụ na-achọ ndị ọkachamara na nchekwa na Admins CEH akwụkwọ?